5 sannadood oo xarig ah "25 jir lagu eedeeyey argagixisnimo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
5 sannadood oo xarig ah "25 jir lagu eedeeyey argagixisnimo
La daabacay torsdag 2 juni 2016 kl 12.52
Islamic State militants pass by a convoy in Tel Abyad, northeast Syria. File Photo. AP-
Maanta ayuu markii ugu horreeysay maxkammad la hor-keeney 25-jir lagu soo oogay sharci dhowaantan ka hir-galay dalka ee la xiriira arrimmaha argagixisada.
Laga soo bilaabo 1-dii bishii abriil 2016ayuu hir-galay xeer lagu xaaraantimeeyneyo in saffarro loo galo sidii loogagarab dagaalami lahaa ururrada xag-jirrada.
Iyadoona markii ugu horreeysay maxkamadlagu soo taagay nin 25 jir ah oo laga soo masuufuriyay dalka Turkiga, dibnaloogu soo celiyey Sweden, halka uu xeer-ilaaliyaha maxkammaduk u soo eedeeyayinuu safar ugu socdaali lahaa dalka Suuriya.
– Waxay iila muuqataa in maxkamaddanisummad wanaag-san u tahay in si dhakhsiiyo leh maxkamad loogu hor-keeno xeerkadhowaantan hir-galay, sida uu sheegay Amir Rostami, ahna gacan yaraha guddigaqaran ee ka hor-tagga falalka argagixisada noocyadiisa kala duwan.
– Xeerka ayaa sidoo kale yeelan karasaameeyn in lagu dhiiran waayo tallaabooyinka falalka argagixis-nimo, halka aydhanka kale iila muuqato in hayaduhu ku dhiiradaan sidii tallaabooyin loogaqaadi lahaa. Iyadoona xeerkan wixii ka dambeeyay ay suurtagal noqotay ingaroommada dayuuradaha laga joojin karo shakhsi ku talo jira inuu u socdaalo siuu uga garab-dagaalamo ururrada xag-jirka.